Cabdi Qeybdiid oo ka hadlay weerarka lagu qaadey Gurigiisa [Daawo]
MUQDISHO, Soomaaliya - Senator Cabdi Qeybdiid ayaa si kulul uga hadlay weerarka lagu qaadey Gurigiisa, kaasi oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah, oo aan la aqbali karin.
Isagoo ka hadlayay Shir Jaraa'id oo uu ku qabtey Muqdisho, ayaa waxa uu Cabdi Qeybdiid sheegay in ciidamo katirsan dowaldda ay ka dambeeyeen weerarka kuwaasi oo xoog ku galay Gurigiisa iyagoo aan wadan warqad ogolaansho ah oo maxkamad kasoo baxday.
Wuxuu tilmaamay in ciidamada ay jirdil iyo dhaawac u geesteen qaar kamid ah askarta ilaaladiisa, iyadoo sidoo kale Taleefoonka gaanta [Mobile] ka qaatey dhowr qof oo xaaskiisa iyo gabar uu dhalay ay kamid ahaayeen.
Guriga Senator-ka waxa uu ku yaallaa Xaafadda Sey Piano ee degmada Hodon.
Cabdi Qeybdiid oo Guriga ka maqnaa xilliga weerarka ayaa sheegay in uu lasoo xiriiray Taliyaha NISA ee gobolka Banaadir, kaasi oo ku wargeliyay in ciidamada soo weeraray aysan kamid ahayn Hay'adda Nabad Sugida, balse ay ahaayeen kuwa dowladda Imaaraadka ay tababartay.
Ciidamada Imaraadka uu tababaray ayaa waxay ku biireen kuwa dowladda kadib markii dhawaan lagu wareejiyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo usoo xiray tababarkooda.
"Hadalka Taliyaha NISA ee ah ciidamada weerarka ka dambeeyay waxaa tababaray Imaaraadka waa mid lagu abuurayo Xaaladda siyaasadeed oo cusub," ayuu GO u sheegay Senator magaciisa codsaday in aan baahin.
Dhanka kale, Qoraal lasoo geliyay Bogga Twitter-ka Villa Soomaaliya, ayaa Madaxweyne Farmaajo waxa uu ku amray Taliyaha Ciidamada Xoogga inuu si deg deg ah ugu baaro ciidamada sida sharci darrad ah ku weeraray Hoyga Cabdi Qeybdiid.
Farmaajo, Fahad Yaasin iyo Khayre ayaa miiska u saaran shaqsiyaad kala...
Yaa ka dambeeya Go'aankii Xeer Ilaaliyaha Soomaaliya?
Soomaliya 17.12.2017. 21:06